KNOWLEDGE Archives - Page3of 25 - XYZ NEWS
ကိုယ်ဝန်ကိုဓာတ်မှန်ရိုက်နေတုန်း ဗိုက်ထဲကလေးက မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီး ကျောချမ်းဖွယ်ပြုံးပြ
March 14, 2020 By Editor KNOWLEDGE, UNUSUAL
ပြန်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုကာ နွားကလေးကို ခင်ပွန်းသည်အဖြစ်ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
သေပြီးနောက်ဘဝ ပြန်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုက တောင်အရှတခွင်က တလူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ တော့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကိုယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။ သေပြီးသား လူတစ်ယောက်က လူ့ဘဝတစ်ဖန် ဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားကျင်လည်ရာ ဘဝသစ်တစ်ခုမှာ ပြန်လည်ဝင်စားတတ်ကြပြီး မိသားစုထဲမှာ ပဲ ဆက်လက်နေထိုင်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက် …
March 13, 2020 By Editor KNOWLEDGE
ဗီဒီယိုဂိမ်းအလွန်အကျွံ စွဲလမ်းနေတဲ့ သားဖြစ်သူကို ထမင်းခွံကျွေးနေရတဲ့ မိခင်
မိခင်တွေဟာ သူတို့ သားသမီးတွေအတွက် မလုပ်ပေးနိုင်တာ ဘာမှ ရှိလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါ။ အမှန်ပါပဲ၊ ဖိလစ်ပိုင်က မိခင်တစ်ဦးကတော့ ဗီဒီယိုဂိမ်း စွဲနေတဲ့ သားဖြစ်သူ ထိုင်ရာမထ ဂိမ်းဆော့နေတာကို ဘေးနားက ထမင်းခွံကျွေးရင်း အဆော့မပျက်စေပါဘူး။ကာလီတိုဟာ Rules of …
March 13, 2020 By Editor KNOWLEDGE, UNUSUAL
ခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့ မြွေကို မွေးစားထားတဲ့ ကလေးသုံးယောက် မိခင်
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် တွားသွားတိရစ္ဆာန်တွေကို မွေးတာဟာ အချို့အတွက် အံ့ဩဖွယ်ရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးသုံးယောက် မိခင်တစ်ဦး မွေးထားတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကတော့ မြွေဖြစ်ပါတယ်။ မြွေတောင် ရိုးရိုးမြွေ မဟုတ်ပါ၊ ခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့ မြွေပါ။အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် သဘာဝတောရိုင်းပညာရှင် …
လူသွားတွေနဲ့ ငါးကို အမေရိကန် ကမ်းခြေမှာ တွေ့ရှိ
ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်တာဟာ အကောင်းဆုံးသော အပန်းဖြေမှု ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ကမ်းခြေမှာ စိတ်အေးလက်အေး လေညှင်းလေးခံပြီး လမ်းလျှောက်တာဟာ ကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ဖွယ်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ အတွေ့အကြုံက ဒီလို ဖြစ်တတ်တာအတွက် ဥပမာတစ်ခုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အဲဒီ …
အမျိုးသမီးတွေသိထားသင့်တဲ့ အမျိူးသားတွေရဲ့ လျှိူ့ဝှက်ချက် – ၆ မျိုး
(1)သူတို့မှာ အနားယူဖို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်သီးသန့်လိုအပ်ပါတယ် အမျိုးသားတွေဟာ ဦးဆောင်နေရခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချရခြင်း၊တာဝန်ယူနေရခြင်းတွေကို အချိန်ပြည့်လုပ်နေရတာ ငြီးငွေ့နေပါတယ်။ထို့ကြောငိ့ သူတို့မှာလဲ သက်တောင့်သက်တာဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ (2)အသေးအဖွဲကိစ္စများကို ခေါင်းထဲ မထည့်ဘူး သူတို့အတွေးက ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သင်ပြောသမျှ အသေးစိတ်တွေကိုသူတို့ ဂရုမစိုက်နိုငိပါဘူး။ဒါမို့ အသေးအဖွဲအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကိုမရစ်ပါနဲ့။ပြောရရင် …
လူကြားထဲမှာ ခေါင်းယားလို့ ခိုးကုတိနေရတာတွေ စိတ်ညစ်နေပြီလား။ဗောက်ပြဿာနာအတွက် လွယ်ကူတဲ့အိမ်တွင်းနည်းလေးတွေ စုစည်းထားပါတယ်။ (၁)ပန်းသီးဗီနီဂါ ရှန်ပူနဲ့ပျော့ဆေးတွေနေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အရေပြားပေါ်မှာ အနယ်တွေတငိကျန်ခဲ့ပါတယိ။ထိုအနယ်တွေကို ပန်းသီးဗီနီဂါက ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ထို့အပြင် ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ မှိုတွေကိုပါသေစေပါတယ်။ -ပန်းသီးဗီနီဂါ ၄ဇွန်းကို ရေနွေး၁ခွက်၂တွင်ရောပါ။ထိုအရည်နဲ့ ဦးရေကို နှိပ်နယ်ပေးပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသော် …
မားစ်ဂြိုလ်ပေါ်က ဓါတ်ပုံထဲကအရာက လူလား ? ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလား ? ရုပ်ထု တစ်ခုလား ?
မားစ်ဂြိုလ်ပေါ်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာ မားစ်ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလူနဲ့တူတဲ့အရာတခု သို့မဟုတ် ဗဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံထွက်ရှိလာပါတယ် ။ ဒီပုံကို NASA ကမားစ်ဂြိုလ်ပေါ်ကိုလွှတ်တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စက်ရုပ်ကနေ ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ပုံထဲကိုလူကိုကြည့်ရတာတော့ ရှည်လျားလွန်လှတဲ့ဝတ်ရုံတစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးဦးခေါင်းပြောင်ပြောင်ပုံစံဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ရှေ့ကတောင်တွေပေါ်ကိုတက်သွားနေကို တွေ့ရမှာပါ ။နောက်ပြီး သူရဲ့လက်နဲ့ညာဘက်ဒူးဟာ မြင်သာထင်ရှားစွာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟန်အဖြစ် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါကလူတယောက်သာမန် …
March 12, 2020 By Editor KNOWLEDGE, UNUSUAL
ထိတာနဲ့ သွေးခဲပြီး သေသွားစေမယ့် လူသတ် ခူကောင်များ
ခူကောင်တွေဟာ တွားသွားပြီး ဘေအန္တရာယ် မပေးနိုင်တဲ့ သတ္တဝါတွေလို့ အလွယ်တကူ ငြင်းနိုင်မလား။ပြောရမယ်ဆိုရင် အခု ခူကောင်တွေကတော့ လူသတ်ခူကောင်တွေလိုတောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဘရာဇီးမှာ စတင်တွေ့ရှိတဲ့ ဒီ ခူကောင်တွေရဲ့ ကိုယ်လုံးမှာ သစ်ပင်အသေးစားလေးတွေ ပေါက်ရောက်နေသလိုမျိုး ခူမွေးတွေ …